Myanmar Society - What Myanmar Actress, Chit Snow Oo is doing at the moment?
Submitanew story Myanmar Society Home
» Personal & Life	» What Myanmar Actress, Chit Snow Oo is doing at the moment? 2
Myanmar Actress, Chit Snow Oo has starred for the ghost movie recently and she is singing on the stages around the outskirts of Yangon. She is also doing asaTV program presenter. Chit Snow Oo said that she doesn't have any plan to sing in Yangon and to releaseasolo music album at the moment, however, she wants to do these if somebody offers her and sponsors her.See More Photos Of Chit Snow Oo!သရုပ်ဆောင် ချစ်စနိုးဦးရဲ့ လက်ရှိ လှုပ်ရှားမှုကတော့ သရဲကားတစ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးထားပြီ၊ နယ်တွေမှာ သီချင်းဆို နေပါတယ်။ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူအဖြစ် လည်းလုပ်နေ ပါတယ်။ ရန်ကုန်ပွဲမှာ ဆိုဖို့နဲ့ တစ်ကိုယ်တော် စီးရီး ထုတ်ဖို့တော့ အစီအစဉ် မရှိပါဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ကမ်းလှမ်းလာမယ့် သူရှိရင်တော့ လုပ်ချင်ပါတယ်လို့ ချစ်စနိုးဦးက ပြောပါတယ်။ ချစ်စနိုးဦးရဲ့ ပုံလေးတွေကို ဒီနေရာမှာ ဆက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။	1 Comment Add this link to... Bury
Add to: Myanmar Actress, Chit Snow Oo has starred for the ghost movie recently and she is singing on the stages around the outskirts of Yangon. She is also doing asaTV program presenter. Chit Snow Oo said that she doesn't have any plan to sing in Yangon and to releaseasolo music album at the moment, however, she wants to do these if somebody offers her and sponsors her.See More Photos Of Chit Snow Oo!သရုပ်ဆောင် ချစ်စနိုးဦးရဲ့ လက်ရှိ လှုပ်ရှားမှုကတော့ သရဲကားတစ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးထားပြီ၊ နယ်တွေမှာ သီချင်းဆို နေပါတယ်။ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူအဖြစ် လည်းလုပ်နေ ပါတယ်။ ရန်ကုန်ပွဲမှာ ဆိုဖို့နဲ့ တစ်ကိုယ်တော် စီးရီး ထုတ်ဖို့တော့ အစီအစဉ် မရှိပါဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ကမ်းလှမ်းလာမယ့် သူရှိရင်တော့ လုပ်ချင်ပါတယ်လို့ ချစ်စနိုးဦးက ပြောပါတယ်။ ချစ်စနိုးဦးရဲ့ ပုံလေးတွေကို ဒီနေရာမှာ ဆက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။">
written by HIVIRUS2012 1518 days ago Arr lone pel, kyay zu pyu p Chit Snow Oo yelt email phyit phyit phone no. phyit phyit shi yin thi khwint pay par. Kyun dawt email legendarydestiny528@gmail.com ko poe loh ya par tal. Kyay zu tin par tal. Ku nyi naing tar shi lel pyaw kya par. Log in to comment or register here.
Related Links	What is Myanmar Society?